आफन्तबाटै किन मारिन्छन् ? « Pahilo News
आफन्तबाटै किन मारिन्छन् ?
प्रकाशित मिति : 22 July, 2019 7:32 am
काठमाडौं, ६ साउन । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाकी ईश्वरी भट्टराईले भाडाका अपराधी लगाएर आमा सावित्रीको हत्या गराइन्। परपुरुषसँगको सम्बन्धमा आमा तगारो बनेपछि असारमा भारतबाट मान्छे ल्याएर उनले हत्या गर्न लगाएकी हुन्। ईश्वरीसहित सिरहा विष्णुपुरका मोहम्मद नौसाद, भारत मधुवनीका मोहम्मद रहिस र अर्जुन भनिने भोला कुमारविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जारी छ।
पोखरामा असार २५ गते लक्ष्मी परियारको शव फेला पर्‍यो। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा उनको हत्यामा श्रीमान् रमेश नेपालीको संलग्नता भेटियो। यो रहस्य बुधबार खुलेको थियो। रमेश र अर्की युवतीबीचको सम्बन्ध बाहिर ल्याउने आशंकामा लक्ष्मीको हत्या भएको थियो। रमेशले भारतबाटै भाडाका अपराधी ल्याएको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ। तीन अभियुक्त फरार छन्।
प्रहरीले छिटो पत्ता लगाएका यी दुई घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यस्ता घटनामा आफन्तकै संलग्नता देखिएको छ। देशभरको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६ वर्ष अवधिमा २२ हजार ३ सय ७५ जनाको हत्या भएको छ। २०७१ देखि २०७५ सम्म प्रहरीमा दर्ता भई अनुसन्धान भएका यी घटना केलाउँदा ६ सय ८४ जना आफन्तबाटै मारिएको देखिन्छ। यस्ता घटनामा श्रीमान्ले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान्, बुवाआमाले छोराछोरी, छोराछोरी÷बुहारीले आमाबुवा, सासूससुराको ज्यान लिएका छन्। सौतेनी आमाबाबु, मामा, काकाकाकी, दाजु, बहिनी, देवर, भाउजू, साली, भिनाजु, सासुससुरालगायत सम्बन्धमै घटना भएका छन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७० मा ४ हजार ६ सय ८७, २०७१ मा ५ हजार १ सय ७२, २०७२ मा ५ हजार ३ सय ६७, २०७३ मा ५ हजार ९ सय ४, २०७४ मा ६ हजार ४ सय ५ र २०७५ मा ५ हजार ३० जनाको हत्या भयो। प्रहरीमा दर्ता भएका ज्यानसम्बन्धी घटनामा खुनडाँका, कर्तव्य ज्यान, विष खुवाएर हत्या, गर्भपतन र आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन जोडिएका छन्।
प्रहरी प्रवक्ता एसपी रमेश थापाका अनुसार ज्यानसम्बन्धी अपराधको ९१ प्रतिशत मृत्यु कर्तव्य गरी मारेको पाइएको छ। ‘ज्यानसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्दा पनि अधिकांशको अन्तिम निचोड हत्यामै जोडिएको देखिन्छ’, एसपी थापाले भने, ‘६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ज्यान मुद्दाका कुल घटनाको ३३ प्रतिशत आफन्तबाटै सिर्जित देखिन्छ। यो डरलाग्दो विषय हो।’
२०७२ देखि २०७५ सम्म हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्दा श्रीमान्ले श्रीमतीको हत्या गराएका २ सय ७५ वटा घटना छन्। ५८ पुरुषको हत्यामाश्रीमती जोडिएका छन्। बाबुआमाले १५ छोराछोरी, छोराले ५३ आमाबुवा, छोराबुहारीले ११ आमाबुवा, आमाले ६२ नवजात शिशु, आमाले मात्रै २४ छोराछोरी, बाबुले मात्रै २२ छोराछोरी, घरपरिवारले ५१ परिवारका सदस्य र भान्जाले तीन मामाको हत्या गरेको देखिन्छ। यीसँगै अन्य केही घटनामा पनि आफन्त जोडिएका छन्।
हत्या घटनामा आफन्तै किन संलग्न हुन्छन् ? ‘प्रायः आफन्त जोडिएका घटनामा अंशबन्डा, यौन, पारिवारिक कलह, गरिबी, मदिरा सेवन जोडिएका छन्’, एसपी थापाले भने, ‘क्षणिक आवश्यकता पूर्तिका लागि छोरीको बलात्कार गरी हत्या गर्ने, गरिबीले गर्दा छोराछोरीको हत्या गरेर आमाले गर्ने, अंश विवादमा बाबुछोराबीच विवाद हुँदै बाबुले छोरा र छोराले बाबुको हत्या गर्ने गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘केही घटनामा मानसिक रोगले ग्रस्त भएका व्यक्तिको पनि संलग्नता देखिन्छ।’